5 Siyaabo inuu ka soo kabsado tirtiray Word Document badbaadin karta Malaha Your Work
1.9 Lugood tirtirto tus
Sidaas, warbixin in aad wax qorayey maalmood oo kaliya la waayay? Waa hagaag, ha argagixin. First of dhan, oo aad u dhaqaaqay si qalad ah waxaa laga yaabaa in ay meel kale, oo aan ogaaday. Isu tar iyo Windows riix Start, Search, iyo dooran dhammaan faylasha iyo fayl. Ku qor magaca (ama ugu yaraan qayb ka mid ah waxaa ka mid ah) ama si fudud * Dadka Duqeyda ah (x) si aad u hesho dhammaan dokumentiyada Kalimadii. Haddii aad dukumentigan hadalka weli waa meel laga heli, ka dibna waxaa suuro gal ah in aad u tirtiray, laakiinse ima aydaan faaruqiso Recycle Bin. Xaalada ugu xun, aad waxaa xitaa dhici karta in la tirtiro ka Recycle Bin, ama qof uu idiinku sameeyey. Ina keena aynu ku siin war wanaagsan. Ma in aad mar kale ku qor dukumenti oo dhan, xitaa haddii ay la tirtiray. Sidee? Ha noo sharax.
Marka file la tirtiray ka computer ah, oo waa inuusan marna si buuxda u baaba'aa. Waxaa weli jira raadad ka mid ah. File ayaa si fudud u noqdo calanka u overwriting. Haddii aad file dhawaan la waayay, oo ma aad ku darto files kasta oo cusub, ayaa fursaduhu yihiin in aad ceshan doonaa waxa si guul leh adigoo raacaya hababka noo fudud. Haddii aad dukumentigan hadalka ayaa ka maqnaa muddo hadda, wali waxaad awoodi doontaa inaad si ay u soo kabsadaan. Laakiin, marmarka qaarkood waxaa laga yaabaa in aadan heli wax kasta dib. Laakiin, ka fiiri dhinaca dhalaalaya. Ugu yaraan waxaad u baahan doontaa wax, halkii ay waxba. Haddii aad u baahan tahay dukumenti hadalka in si xun, halkan waxaa ka mid ah tallaabooyinka aad qaadi karto si aad isku dayaan in ay soo celiyaan.
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa in si dhab ah raadiyo aad dukumentigan. Sidaas, haddii aad baadhi aad file ka dibna waxa ay haatan u sameeyaan. Guji Start Search iyo nooca magaca document (ama ugu yaraan qayb ka mid ah waxaa ka mid ah) ama si fudud * Dadka Duqeyda ah (x) si aad u hesho dhammaan dokumentiyada Kalimadii.
1. Hubi Recycle Bin
Mid ka mid ah xal aad u fudud noqon lahaa si ay u hubiso Recycle Bin. Haddii aad tahay nasiib, dukumenti aad hadalka weli waxaa jiri doona, ammaan iyo kalsooni.
Weli waxba? Ha welwelin, ma aha waxaan xitaa u dhow qulqulaya ka fursadaha.
2. Raadi kaabta ah File Word
Waxa soo socda aad samaynaysaa waa raadinta faylka raad raac ah oo aad dukumentigan hadalka (.wbk). Si taasi ay u shaqeeyaan, waxaad u baahan tahay in ay hayaan karti Word, oo aad u baahan tahay inaad ogaato waxaa lagu dokumentiga la badbaadiyey.
Fur aad hadalka Microsoft iyo dooran tab File ee geeska bidix ee sare ee.
Riix tab File iyo dooran Open.
Dooro gal meesha document ahaa ee la soo dhaafay ku korinnay. Dooro file gurmad ah oo guji Open.
Haddii aadan xasuusan karin goobta dukumintiga, ka dibna u hubiso in ay baadhaan computer oo dhan si aad u hesho gurmad Word files by galaan. Waxaad sidaas samayn kartaa adigoo galaya * .wbk galay Windows Search.
3. Isku day in aad ka Word ee Auto Ladnaansho Tool
Weli nasiib jirin? Tallaabada xigta aad u noqon lahayd in ay isku dayaan in ay Word ee Auto Ladnaansho qalab. Haddii, tusaale ahaan, aad computer ku burburtay iyo adiga oo aan ku badbaadi aad file, marka aad Word furo marka xigta, waa in file muuqan dhinaca bidix ee aad suuqa kala Word.
Haddii aysan taasi dhicin, markaas waxaad ka raadin kartaa files AutoRecover gacanta ku. Fur Microsoft Word (2010), guji tab File ka dooro Recent. Qeybta hoose ee menu, dooro Ladnaansho badbaadin Documents. Waxaad isticmaali kartaa si aad file waxaa.
Haddii aadan haysan Doorashadan in aad version of Word, si fudud u baadhaan computer ee * files .asd, iyadoo la isticmaalayo Windows Search sida lagu soo sharxay bilowga.
Haddii weli aad akhridaan, in macnaheedu waa adiga oo aan ka soo kabsaday aad file. Waa in aad dareento sida qofka unluckiest adduunka, sax? Laakiin, noogu aamini, in aad nasiib uusan weli ka soo. Halkan waa inaad soo socda sameyn.
4. Search for ku meel gaar ah Files
Your badiyay document Word waxaa laga heli karaa meel gaar ah files folder your computer ee. Open Windows mar kale Search, iyo waqtiga raadinta, waayo, * files .tmp. Ama, hubi folder soo socda: C: \_ Documents iyo Settings \_ * isgarad-* \_ Settings Local \_ saxid. Ka hor inta raadinaya galkan, furo Windows Explorer ama My Computer, F10 saxaafadeed iyo in la hubiyo si aad u hubiso ikhtiyaarka oo u suurta galinaya in aad aragto files maqan iyo fayl. Marka aad maamuli in ay sidaa sameeyaan, files aad ee guud ahaan way iman doonaan, oo aan loo magacaabay dukumentiyada asalka ah. Waxaad dhirtuba waa iyada oo faylasha, ilaa aad ku dhan baadhaan.
Tilmaam in badbaadin kartaa waqti aad waa in waraaqaha Word ku meel gaar ah inta badan ka bilaabmaan ~. Raadi qof marka Author faylasha.
Haddii aad u maamulaan si aad u ogaato file Word ku meel gaar ah, ikhtiyaarka ugu fiican noqon lahayd in ay fur adigoo isticmaalaya buugayga.
5. Isticmaal Data Recovery Tool
Haddii aad weli ma maareeyo si aad u hesho dukumintiga aad raadineyso, halkan waa ikhtiyaarka ugu awooda badan. Waa inaad had iyo badbaadin ugu fiican ee la soo dhaafay. Haddii uusan midna mid ka hababka hore shaqeeyo, waxaad u baahan doontaa in la isticmaalo qalab kabashada xogta. Waxaa jira qalab badan oo soo kabashada lacag la'aan ah heli karaa, laakiin waxaa laga yaabaa in aan ka heli faylka (sababtoo ah qalabka ma yihiin kuwo aad isku halayn karo), ama waxaa laga yaabaa in aanay noqon in la soo celiyo file dhammaan awoodi (waayo, ma ay qalab aad u sareeya). Mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan ee dib u soo kabashada jiraan, waa Wondershare Data Recovery .
Tani qalab undelete la isku dayay kartaa lacag la'aan ah (on saarka ee website-ka ), iyo haddii aad jeceshahay in aad ka iibsan kartaa $39.90e kaliya. Gadashada soconaysaa uu nool yahay oo idil. Wondershare Taageertaa qalabka oo dhan, si aad u soo kaban karto, xitaa files tirtiray ka drives USB, ama wax kasta oo baabuur kale saari karo. Software Tani waxay taageertaa ku dhowaad nooc kasta oo file jiro. Sidaas, haddii aadan ka heli warqadda asalka ah, idinku Imtixaamo raadinaya faylasha ku meel gaar ah.
Wondershare Soo kaban karto, files tirtiray shil, howlgal aan habboonayn, shilalka disk adag ama xataa fayrusyada computer.
All oo dhan, haddii aad tirtiray document Kalimada fursado waa in aad u soo celin doonaa. Waxaad isku dayi kartaa oo dhan oo ka mid ah hababka kor ku xusan, iyo haddii midkoodna shaqeeyaan tijaabiso qalabka soo kabashada. Ama, haddii aad rabto in lagu badbaadiyo wakhtiga aad, isku day in aad si fudud u soo baxay Wondershare Data Recovery bilowga. Haddii aan Wondershare Data Recovery soo kaban karto, aad dukumentigan markaas wax kale ma awoodno.
4 Solutions Easy in ay tirtirto Downloads ka qalab kasta
> Resource > Ladnaansho > 5 Siyaabo inuu ka soo kabsado tirtiray Word Document badbaadin karta Malaha Your Work